स्लिक किक: एक ग्लोबल बहु च्यानल मार्केटिंग प्लेटफार्म | Martech Zone
स्लिक किक: एक ग्लोबल बहु च्यानल मार्केटिंग प्लेटफार्म
बिहीबार, डिसेम्बर 19, 2013 बुधबार, डिसेम्बर 18, 2013 Douglas Karr
जबकि तिनीहरूको साइट एक को रूप मा आफ्नो प्लेटफार्म घोषणा मार्केटिंग स्वचालन प्रणाली, मलाई थाहा छैन म स्लीक किकको सुविधाहरूको समीक्षा दिएँ। मार्केटिंग अटोमेसनले सामान्यतया एक इनबाउन्ड मार्केटिंग प्रोग्रामलाई मद्दत गर्नको लागि अभियान फ्लोहरू र सिड स्कोरिंग समावेश गर्दछ ... जसलाई स्लीक किक समर्थन गर्दैन। तर म तिनीहरूको प्रमाणिकरण गर्नेछु बहु-च्यानल मार्केटिंग क्षमताहरू तपाईंले भिडियो मुनिको सूचीबाट देख्नु हुनेछ ... वाह! यो प्लेटफर्म पहिले नै बहु-भाषा र जान तयार छ। उनीहरूले आफ्नो डेटाबेसमा २,००० सम्पर्कहरू भएका ग्राहकहरूको लागि जीवनको लागि नि: शुल्क खाताको समेत घोषणा गरे।
जब प्लेटफार्महरू सबैमा एकल हुनेको बारेमा कुरा गर्छन्, मेरा आँखामा चम्किन्छन् ... तर स्लिक किक लगभग प्रत्येक माध्यम यसको प्लेटफर्ममा बन्डल छ:
इमेल मार्केटिङ - टेम्प्लेटहरूको एर्रेको साथ ईमेल मार्केटिंग समाधान जहाँ तपाईं पठाउन, ट्र्याक र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
फ्याक्स प्रसारण - हो, यो अझै व्यावहारिक छ र कहिलेकाँही ईमेल ठेगाना भन्दा तपाईंको सामानहरू बजारमा फ्याक्स नम्बर प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।
SMS मार्केटिंग - पाठ सन्देश दुबै सार्वभौमिक र प्रभावकारी हुन जारी छ, जुन कुनै पनि माध्यमको प्रस्तावहरूमा उच्चतम रिडेम्पसन रेटहरू प्रदान गर्दछ।
फारम बिल्डर अप्ट इन सूची निर्माण गर्न आवश्यक जानकारी स collect्कलन गर्न मद्दत गर्दछ। सजीलै फाराम बिल्डर सिर्जना गर्नुहोस् तपाईंको कस्टम आवश्यकताको आधारमा डाटा संकलन गर्न।
ल्यान्डिंग पृष्ठहरू - तपाईंको एकल साईट भन्दा बढि एक्सपोजर बढाउन तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्नुहोस्।
अटोरेस्पोन्डर - तपाईंको ईमेल मार्केटिंग अभियान र राजस्व बढ्दैको साथ तपाईंको ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस्।
अनलाइन सर्वेक्षण - फारमहरू, सर्वेक्षणहरू र सर्वेक्षणहरू सिर्जना गर्नुहोस् तपाईंको सम्भावितता र ग्राहकहरूको बुद्धिको बढ्ता गर्न।
आवाज प्रसारण - भोलिको प्रसारण स्वचालित सेवा मार्फत तपाइँको ग्राहकहरुलाई उनीहरूको अर्को भुक्तानी, नियुक्ति, अद्यावधिक र अधिक बारे सम्झाउनुहोस्।
घटना व्यवस्थापन - घटना होस्टिंग पहिले कहिल्यै सजिलो भएको छैन।
सम्पर्क व्यवस्थापन - एकै स्थानमा तपाईंको सबै सम्पर्कहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् र जोहो, सेल्सफोर्स वा माइक्रोसफ्ट डायनेमिक्ससँग एकीकृत गर्नुहोस्।
ट्विटर अभियान - सामाजिक जानुहोस्, ग्लोबल र गो भाईरल जानुहोस्।
फेसबुक अभियान - तपाईंको ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूको साथ नेटवर्क।
मलाई यकिन छैन कि मान्छेहरू कहाँ अवस्थित छन्, तर साइटमा केही भाँचिएको अ given्ग्रेजी दिएपछि म केवल यो अनुमान गर्न सक्छु कि उनीहरू त्यहीं अवस्थित छन् जहाँ अ English्ग्रेजी दोस्रो भाषा हो। किनकि यो देखा पर्दछ कि तिनीहरूको ब्लग भर्खर १ नोभेम्बर २०१ 1 मा सुरू गरिएको थियो - म अनुमान लगाउँदै छु कि त्यहाँ अझै केही कामहरू छन् ... तर यो धेरै आशाजनक देखिन्छ।
मलाई चुनौती छ कि यी प्लेटफर्महरूले स्थापित मार्केटिंग प्लेटफर्मको सामने राख्दछन्। जबकि विकास सजिलो भएको छ र टेक्नोलोजी सस्ता भएको छ, मार्केटिंग प्लेटफर्मले प्रवृत्तिको साथमा उनीहरूको मूल्य समायोजन गर्दैन। यस जस्तो नयाँ स्टार्टअपहरूले निश्चित रूपमा एक खुट्टा पाउन र उद्योगमा मूल्य निर्धारण तल ल्याउन सक्छ, बहु-च्यानल मार्केटिंग कुनै पनि आकारको व्यवसायको लागि उपलब्ध गराउँदै।
टैग: माईक्रोसफ्ट गतिशीलताबिक्री बलचतुर किकZoho
मिलेनियलहरूका लागि यस वर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय उपहार? सुझाव: यो XBox एक हैन
कसरी उद्यम ब्रांडका स्टाफ र सामाजिक को लागी बजेट